Dowladda Burundi oo ku Hanjabtay Inay Ciidamadooda Kala Baxayaan Dalka Soomaaliya (VIDEO) - Hablaha Media Network
Dowladda Burundi oo ku Hanjabtay Inay Ciidamadooda Kala Baxayaan Dalka Soomaaliya (VIDEO)
HMN:- Baarlamaanka dalka Burundi oo kulan ku yeeshay magaalada Bujumbura ee xarunta dowladda Burundi ayaa waxa ay kulankooda kaga hadleen Ciidanka Howlgalka ujooga dalka Soomaaliya ee AMISOM gaar ahaan Ciidanka ka socda Burundi.
Xildhibaanada Burundi ayaa waxa ay Wasiirka Gaashaandhiga ee dalkaasi Burundi, Emmanuel Ntahomvukiye iyo Taliyaha Booliska Alain Guillaume Bunyon ay su’aalo ka weydiiyeen xaalada ay ku sugan yihiin Ciidanka Burundi ee Howlgalka ujooga Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga ayaa waxa uu sheegey Ciidanka Burundi ku dhowaad 10 Bilood in aysan qaadan Mushaarkii ay xaqa u lahaayeen, ciidamaduna ay weli sugayaan gunadoodii.
Xildhibaanada Burundi ayaa sheegey in arrintani ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, oo uusan jirin Dal aqbalaya in Ciidankiisa uu xuquuq la’aan ku shaqeeyo, taasi bedelkeedana ay wanaagsan tahay Ciidanka Burundi dib loogu soo celiyo Dalkooda.
Xildhibaanada Baarlamaanka Dalka Burundi ayaa Midowga Afrika ugu baaqay in ay bixiyaan Mushaaraadka ay xaqa u leeyihiin Ciidamadooda ka Howlgalla dalka Soomaaliya, hadii kalana ay isaga soo baxayaan dalkaasi.
Dowladaha ku bahoobay Midowga Yurub ayaa joojiyay inay si toos ah lacagta ciidamada ugu dirto dowladda dalka Burundi, kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen dagaalo siyaasadeed iyuo xukun kororsi qasab ah.